नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र वनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैनः डा. लोहनी « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र वनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैनः डा. लोहनी
प्रकाशित मिति : २०७८, २२ कार्तिक सोमबार २१:५५
सर्लाही । राप्रपाका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले आन्दोलनको बलमा राप्रपाले राजसंस्था स्थापना गर्ने बताएका छन् । सोमबार सर्लाहीको मलंगवामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लोहनीले अभिभावकविहीन मुलुकलाई दलहरुे लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको अखाडा वनाएको बताए ।
उनले प्रजातन्त्रको मूल आधार शक्ति शन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट कांग्रेस तथा कम्युनिस्टहरु च्युत भएका कारण प्रजातन्त्रको रक्षार्थ पनि राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले राजसंस्था हिजोभन्दा आज झन् सान्दर्भिक देखिएको भन्दै नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र वनाउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए । उनले मधेसवादी दलहरु समेत असफल भएका कारण अब मुलुकको नेतृत्व राप्रपाले गर्नुपर्ने बताए ।
अदालतको गाईजात्रा,निरीह संसदले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको भन्दै लोहनीले यो व्यवस्था असफलताको लक्षण भएको बताए । अधिवेशनले सत्यनारायण यादवको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । कार्यक्रमलाई राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिय।